WhatsApp အသစ်အဆန်း: ပြခန်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်များဝှက်ရန်။ | Androidsis
Manuel Ramirez | | Android application များ, ဓာတ်ပုံ, NOTICIAS, လဲ tutorial, Whatsapp
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝါအတွက်အခြားထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် chat app အသစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရသည် download လုပ်ထားသောဖိုင်များအားလုံးကို WhatsApp မှဖုံးကွယ်ပါ ပုံပြခန်းအက်ပ်မှ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်သည် WhatsApp ၌သင်ပို့လွှတ်သည့်ဖိုင်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ပြုလုပ်လျှင်ပင်ဤအသစ်အဆန်းဖြင့်သင်ထူးဆန်းသောဆုတ်ယုတ်မှု မှလွဲ၍ အချိန်ကုန်သက်သာလိမ့်မည်။
WhatsApp ကိုမည်ကဲ့သို့ configure လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည် အလိုအလျောက်ပေါ်လာပါဘူးဒေါင်းလုပ်လုပ်နေကြသည် ပုံပြခန်းထဲမှာ။ သူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆီကိုပုံပြနေတယ်ဆိုရင်၊ အဆက်အသွယ်တစ်ခုပို့လိုက်တာနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ joust ကပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Downloads ဖိုင်များကို WhatsApp မှဝှက်ရန်
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်များ (သို့) ရုပ်ပုံများကိုဖျောက်ထားခြင်းသည် လုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ် ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ Android ရဲမှသိသော ပါဝါလိုပဲ သင်၏ကိရိယာမှသင်ဖျက်လိုက်သောဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူပါ ပြီးတော့ WhatsApp မှာရှိနေတုန်းပဲ။
ငါတို့ရှိသည်ဟုပြောရမည် ပုံတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် WhatsApp ကိုအပေါ် downloaded ဖိုင်များ။ တစ်ခုက app တစ်ခုလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့သူကစကားပြောဖို့ (သို့) အုပ်စုလိုက်စကားပြောရန်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ စကားမစပ်, ဤနေရာတွင် chat group မှပါဝင်သူများအားမည်သို့နှုတ်ပိတ်ရမည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်.
ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံး၌တွေ့လိမ့်မည် ချိန်ညှိချက်များ> ချက်တင်များ> မီဒီယာကိုပြခန်းတွင်ပြပါ.
အားလုံးအကြောင်းအရာပိတ်ထားတဲ့အခါ မကြာသေးမီက download လုပ်ထားသောမီဒီယာကိုသင်ကြားမည်မဟုတ်ပါ ပြခန်း၌တည်၏။ WhatsApp သည်မကြာသေးမီကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေသောကြောင့်လာမည့်နေ့ရက်များသည်လာမည့်နေ့ရက်များတွင်တက်ကြွလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့၎င်းသည်ဆာဗာဘက်မှဒေသတွင်းအခြေခံပေါ်တွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်။
သင်ရုံစကားဝိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု chat ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အဲဒီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည် - ဟုတ်သည်မဟုတ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည့်တစ်ခု။
ယခုသင်လုပ်နိုင်သည် download လုပ်ထားသောဖိုင်များကို WhatsApp မှဖုံးကွယ်ပါ သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ရုပ်ပုံပြခန်းကနေတခြားသူတွေကိုပြသတဲ့အခါဘယ်သူမှသူတို့ကိုမသင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » download လုပ်ထားသော WhatsApp ဖိုင်များကိုသင်၏ပုံပြခန်းမှဖုံးကွယ်နည်း